Steelseries Arctis Pro + Game DAC Gaming Headset (Black)-1 ~ ICT.com.mm
HomeSteelseries Arctis Pro + Game DAC Gaming Headset (Black)-1
Steelseries Arctis Pro + Game DAC Gaming Headset (Black)-1
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ PC-USB,PlayStation-(Original and Pro,-Optical,-USB,PS4 Slim:,-Optical(via TV, AVR, or HDMI adapter), USB,Neodymium Drivers-40 mm / 1.6 inches, Headphone Frequency Response-10–40,000 Hz, Headphone Sensitivity-102 dB SPL, Headphone Impedance-32 Ohm, Headphone Total Harmonic... [Learn more]
PC-USB,PlayStation-(Original and Pro,-Optical,-USB,PS4 Slim:,-Optical(via TV, AVR, or HDMI adapter), USB,Neodymium Drivers-40 mm / 1.6 inches, Headphone Frequency Response-10–40,000 Hz, Headphone Sensitivity-102 dB SPL, Headphone Impedance-32 Ohm, Headphone Total Harmonic Distortion-<1%, Microphone Type-Retractable Boom, Microphone Polar Pattern-Bidirectional Noise-Canceling, Microphone Frequency Response-100–10,000 Hz, Microphone Sensitivity-38 dBV/Pa, Microphone Impedance2200 Ohm, Microphone Noise Cancellation-Yes, GameDAC-Frequency Response5–40,000 Hz, Audio Formats-Up to 96 kHz, 24 bit, THD + N-<0.0032%, Version Support-3.12.0 +, Platform Support-Windows 7+, Mac OS X 10.9+.
နာမည်ကျော် (Arctis Pro + Game DAC) Gaming Headset အတွဲက “Elite” အဆင့် Gamers တွေနဲ့ eSports Pros တွေအတွက် Steelseries မှ အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Gaming အသံစနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြု High-Res Gaming အသံစနစ်ဖြစ်ပြီး Game နဲ့ သီချင်းသံတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ မကြားဘူးတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသံကွာလတီ 40,000 kHz အထိရရှိတဲ့ Gaming Headset ဖြစ်ပြီး DTS Headphone: x v2.0ပတ်လည်အသံ နည်းပညာအသစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Game DAC မှာ 3.5mm jack ကြိုးကိုအသုံးပြုပြီး VoIP chat တွေကို ချိတ်ဆက်နိုင်သလို စမတ်ဖုန်းကနေ ဝင်လာတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုလည်း လက်ခံဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ Streaming ပြုလုပ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အသံနဲ့အတူဂိမ်းထဲကအသံတွေကို ကြည့်ရှုနေသူတွေကြားရစေဖို့ Line Out jack ပေါက်မှာ ပြင်ပစပီကာတွေကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတိုင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် တည်ဆောက်ထားပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ Fabric အမျိုးအစား နားကြပ်ကူရှင်ကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့်သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အချိန်အကြာကြီး အသုံးပြုနိုင်သလို အသံထွက်အရည်အသွေးကလည်းအမိုက်စားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Arctis Pro Headset မှာ စတူဒီယိုအရည်အသွေးရှိ ကြည်လင်ပီသတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး အသံပြတ်သားမှုနဲ့အတူ နောက်ခံဆူညံသံတွေကိုလျှော့ချဖယ်ရှားပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် Team နဲ့ ကစားချိန်မှာ မိမိရဲ့ကစားဖော်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မှာပါ။ USB, Optical, 3.5mm Jack တို့ဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး PC နဲ့ PS4 အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Gaming Audio Systemဖြစ်ပါတယ်။ RGB Illumination Light ပါဝင်ပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။